Home ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စီးပွားရေးသတင်း ဆောင်းပါး မြန်မာနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ သတင်းပြည်တွင်းသတင်း ဒေသန္တရသတင်း ပြည်သူ့အသံ ကမ္ဘာ့သတင်း ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း ရသသတင်း နာရေးသတင်း အားကစားသတင်း အမှားပြင်ဆင်ချက် အင်တာဗျူး အထူးကဏ္ဍပြည်သူ့စစ်သား သုတေသနနာဂစ် ၁ နှစ်ပြည့် အမေရိကန် ပေါ်လစီနှင့် မြန်မာရေးရာ ကမ္ဘာ့ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ၈ လေးလုံး အထူး အာဇာနည်နေ့အထူး အမေဒေါ်အမာ အထူး ဆန္ဒခံယူပွဲအထူး ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၁၀ မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲ သတင်းဖြစ်စဉ်များ ရွေးကောက်ပွဲတွင်း တင်ဆက်မှု ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လိုသူများ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်သူများ ပါတီအကြောင်း သိကောင်းစရာ ရွေးကောက်ပွဲ အထူး လွတ်မြောက်မှုသို့ သိုမှီးရာရန်ကုန်နှင့်မုန်တိုင်း မြန်မာပြည်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကြေးနန်းများ အိုဘားမား မြန်မာ ခရီးစဉ် အာဘော်နှင့်အမြင်ဆောင်းပါး အယ်ဒီတာ့ထံပေးစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော် သဘောထားအမြင် ညွှန်းဆိုရာ ရသဘဏ်တိုက်ကဗျာ ပြဇာတ် စာအုပ်စင် ရုပ်ရှင် ခရီးသွားဆောင်းပါး မားလ်တီမီဒီယာဗီဒီယို Photo EssayPhoto Essay. ဓါတ်ပုံ ကာတွန်း ဂျာနယ် မဇ္ဈိမ ရေဒီယို မဇ္ဈိမတီဗီRFA & Mizzima TV Voter Voices Mizzima TV Weekly: Business News ကြေညာချက် Home > သတင်း > ပြည်တွင်းသတင်း > ရခိုင်ပြည်နယ်ကတင်းမာမှုများ အေးဆေးငြိမ်သက်သွားရန် စိတ်ဓါတ်ရေးရာခေါင်းဆောင်မှု လိုအပ်ဟု ICG က ပြော
ရခိုင်ပြည်နယ်ကတင်းမာမှုများ အေးဆေးငြိမ်သက်သွားရန် စိတ်ဓါတ်ရေးရာခေါင်းဆောင်မှု လိုအပ်ဟု ICG က ပြော	မဇ္ဈိမသတင်းဌာန	| ကြာသပတေးနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၁၄ နာရီ ၁၁ မိနစ်	မဇ္ဈိမသတင်းဌာန ။ ။ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း ဖြစ်ပွါးနေသည့်ဒေသတွင်းပဋိပက္ခတခုသည် ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် မူဆလင် ပဋိပက္ခအဖြစ် လူမျိုးပေါင်းစုံ ဘာသာပေါင်းစုံမှီတင်းနေထိုင်သည့် မြန်မာ နိုင်ငံတွင် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သွားနိုင် သည့် အန္တရာယ်ရှိနေသည်ဟု နိုင်ငံတကာပဋိပက္ခ ဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ကြီး (CIG) ကပြောသည်။နိုင်ငံတကာဥာဏ်ကြီးရှင်အဖွဲ့ဖြစ်သော အိုင်စီဂျီ က နိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက်နေ့က မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းမှ မိုးသက်မုန်တိုင်း (Storm Clouds on the Horizon) အမည်ဖြင့် ထုတ်ဝေလိုက်သော အစီရင်ခံစာတွင် `မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေး ခြေလှမ်းများအရှိန်ရနေသော်လည်း ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ လူမျိုးစုချင်း အကြမ်းဘက်မှုသည်နိုင်ငံတည်ငြိမ်ရေးအတွက် ခြိမ်းခြောက်မှုတရပ်ဖြစ် နေသည်´ ဟု ရေးသားထားသည်။`ရှေ့တွင်ကြုံတွေ့ရမည့် စိန်ခေါ်မှုအများအပြားကိုဖြေရှင်းနိုင်မည့် ရေရှည်အဖြေ တခုရရှိရန်အတွက် နိုင်ငံခေါင်းဆောင် အများအပြားပါဝင်သည့် အဆုံးအဖြတ် ပေးနိုင်စွမ်းရှိသော စိတ်ဓါတ်ရေးရာခေါင်းဆောင်မှု တရပ် လိုအပ်နေသည်။ ထိုစိန် ခေါ်မှုများထဲတွင် ရိုဟင်ဂျာနှင့်အခြားမူဆလင်လူနည်းစုများအပေါ် ကြာရှည်ကြာ များခွဲခြားဆက်ဆံခဲ့မှုများလည်းပါဝင်နေသည်´ ဟု ရေးသားထားသည်။ဤအစီရင်ခံစာကို အမေရိကန်သမ္မတ၏သမိုင်းဝင် မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ် မစတင်မီ ရက်အနည်းငယ်အလိုတွင် ထုတ်ပြန် လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ရိုက်တာသတင်းတရပ် ၏အဆိုအရ `လူမျိုးရေး အကြမ်းဘက်မှုများကို ပိုမိုထိန်းချုပ် ကိုင်တွယ်´ ဘို့ မြန်မာအစိုးရအပေါ် တင်းမာသည့် သဘောထား တရပ်ချမှတ်ရန် သမ္မတအိုဘားမား ဖိအားပေးခံနေရ သည်ဟု ဆိုသည်။ရိုဟင်ဂျာလှေစီးပြေးဒုက္ခသည်အုပ်စုတခုကို လုံခြုံရေး အစောင့်အရှောက်များဖြင့် ထရပ်ကားများပေါ်တင်ကာ ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ရှိ ရနောင်းသို့ ခေါ်ဆောင်သွား သည်ကို မြင်ခဲ့ရသည်ဟု ဖူးခက်မြို့မှ ထိုင်းသတင်းထောက် တဦး ကလည်း ထိုအတောအတွင်း မဇ္ဈိမ သို့ ပြောဆိုလာသည်။ရိုဟင်ဂျာယောက်ျားလေးများနှင့် အမျိုးသားများစုစုပေါင်း ၁၂၂ ယောက်အပြည့် တင်ဆောင်ထားသည့် လှေတစီး ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း ဖူးခက်မြို့ကမ်းခြေတွင် စနေနေ့က သောင်တင်လာခဲ့ကြောင်း၊ သူတို့ကို ထိုင်းရဲက ဖမ်းဆီးပြီး တညချုပ် ထားခဲ့ကြောင်း ဖူးခက်ဝမ်းက တနင်္လာနေ့က သတင်းပေးပို့သည်။ထို ၁၂၂ ဦးစလုံးကို မြန်မာနိုင်ငံသို့ ချက်ချင်းပြန်ပို့မည်ဟု ရနောင်းမြို့ရှိ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးဌာနအရာရှိတဦးကို ကိုးကားကာ ထိုသတင်းတွင် ဆက်လက်ပြော ဆိုထားသည်။ထိုအဖြစ်အပျက်၏ အကြောင်းအရာ အသေးစိတ်ကို မဇ္ဈိမက ထိုင်းအာဏာပိုင်များနှင့် စုံစမ်း အတည်ပြုနိုင်ခြင်း မရှိသေးပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ရိုဟင်ဂျာ အမျိုးသားများ လှေစီးထွက်ပြေးခြင်းများကို လွန်ခဲ့သော အပတ်များအတွင်း မကြာခဏ ကြားသိခဲ့ရပြီး သူတို့သည် မကြာခဏပင် အလွန်ဆိုးဝါးသော အန္တရာယ်များ ကျရောက်ခဲ့ကြသည်။ဘင်္ဂလာဒေ့ရ်ှကမ်းခြေအလွန်တွင် တရားမဝင်ရွှေ့ပြောင်း ထွက်ခွါလာသူများ အပြည့်တင်ဆောင်လာသည့် လှေတစီး ပင်လယ်ပြင်တွင် မှောက်ခဲ့ကြောင်း အေပီသတင်းဌာနက နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်နေ့က ရေးသားထားသည်။ ငါးဖမ်းလှေ တစီးက လူ ၂၃ ဦးကိုကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့သော်လည်း လူ ၅ဝ မှာ ပင်လယ်ပြင်တွင် ပျောက်ဆုံးနေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် တပ်မှူးတဦးကို နာမည်တပ် ကိုးကားကာ ထိုသတင်းတွင် ရေးသားထားသည်။`အများအားဖြင့် ရိုဟင်ဂျာ မူဆလင်များဖြစ်သော တရားမဝင်ရွှေ့ပြောင်းလာသူ ၇ဝ ခန့်သည် မလေးရှားသို့လှေဖြင့် သွားရောက်နေစဉ် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အတွင်း နစ်မြုပ်သွားခဲ့သည်´ ဟု အဆိုပါအေပီ သတင်းတွင် ရေးသားထားသည်။
မဟီဒေါ တက္ကသိုလ်တွင် နိုင်ငံတကာ သမိုင်းပညာရှင်များ ရခိုင်သမိုင်းရှင်းလင်း	ရခိုင်ကွန်ယက်များ ညီလာခံက လက်ပံတောင်း အကြမ်းဖက်မှုကို ရှုတ်ချ	ကျောက်ဖြူ အထူးစက်မှုဇုန် ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းကို ခြိမ်းခြောက်နေဟု အစီရင်ခံစာဆို	ဘင်္ဂါလီ အကျဉ်းသား ၁၅ ဦး ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှသို့ လွှဲပြောင်းပေးလိုက်	ALD ပါတီက ရခိုင်လူထုနှင့် လှည့်လည်ဆွေးနွေး	ရခိုင်ပြည်နယ် အတွက် ကုလထောက်ပံ့လေယာဉ် ထွက်ခွါလာ	သမ္မတ၏ ရခိုင်ပဋိပက္ခ ဖြေရှင်းနည်း လေးသွယ်	Who is Online
We have 64 guests online	www.bysjl.com	© Copyright 1998 - 2012 Mizzima News. All Rights Reserved